“၁၅၀၀ အချစ်” နဲ့ “၅၂၈မေတ္တာ” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Literature/Books » “၁၅၀၀ အချစ်” နဲ့ “၅၂၈မေတ္တာ”
“၁၅၀၀ အချစ်” နဲ့ “၅၂၈မေတ္တာ”
Posted by Shar Thet Man on Oct 19, 2012 in Literature/Books | 8 comments
သတ္တလောကကြီးထဲမှာနေကြတဲ့သူမှန်သ၍အချစ်အကြောင်း ပြောကြမယ်ဆိုလျှင် မြန်မာလူမျိုး အများစုက “၁၅၀၀ အချစ်” နဲ့ “၅၂၈မေတ္တာ” ဆိုပြီး နှစ်မျိုးခွဲပြောလေ့ ရှိကြပါတယ်။သမီးရည်းစား အချစ်ကို “၁၅၀၀ အချစ်” ၊ ပူလောင် ပြင်းပြတဲ့ အချစ်လို့ ပြောပြီး . . . မိဘတွေရဲ့ သားသမီးအပေါ်ချစ်တဲ့ အချစ်ကိုတော့ “၅၂၈ မေတ္တာ” ၊ အေးမြချမ်းမြေ့တဲ့ ချစ်ခြင်း မေတ္တာ ဆိုပြီး
မထင်မှတ်ဘဲ ၁၅၀၀/၅၂၈ ဆိုတဲ့ ဂဏန်းတွေ ဘာလို့ အဲလို ဖြစ်နေရတာလဲ ဆိုတာကို ဆရာမ “ဂျူး” ရေးတဲ့”မျှော်လင့်ချက် နှင့် အခြား မျက်နှာဖုံးဆောင်းပါးများ” စာအုပ်လေး ဖတ်လိုက်ရတယ်။ အဲဒီ ၁၅၀၀ နဲ့ ၅၂၈ ဂဏန်းတွေ ဘယ်လို ရလာသလဲ ဆိုရင်တော့……
၁။ ၁၅၀၀ အချစ် (ပူလောင်သော အချစ်)
ကိလေသာဆယ်ပါးကို အခြေခံတယ်။ အဲဒီ ကိလေသာစိတ် (၁၀) ပါးကတော့ ဒီအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ် –
(၁)လောဘ ( တပ်မက်ခြင်း)
(၅)ဒိဋ္ဌိ ( မှားသော နှလုံးသွင်းခြင်း၊ အယူရှိခြင်း)
(၆)ဝိစိကိစ္ဆာ (အာရုံကို မဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်း)
(၇)ထိန (စိတ်၏ မခန့်ခြင်း)
(၈)ဥဒစ္စ (စိတ်၏ မငြိမ်သက်ခြင်း၊ ပျံ့လွင့်ခြင်း)
(၉)အဟီရိက (ကာယဒုစရိုက် ပြုရခြင်း၌ မရှက်ခြင်း)
(၁၀)အနောတ္တပ္ပ (ကာယဒုစရိုက် ပြုရခြင်း၌ မလန့်ခြင်း)
အဲဒီ ကိလေသာ(၁၀)ပါးကို ရုပ် စုစုပေါင်းနဲ့ မြှောက်ရပါတယ်။ ရုပ်စုစုပေါင်းဆိုတာက….
– လက္ခဏာရုပ် (၄) ရှိတယ်
– နိပ္ဖန္နရုပ် (၁၈) ရှိတယ်
– နာမ် (၅၃) ရှိတယ်
ပေါင်းလိုက်ရင် (၇၅) ရပါတယ်။ အဲဒီ ရုပ်စုစုပေါင်း (၇၅)ကို ကိလေသာ(၁၀)ပါး နဲ့ မြှောက်တော့ ၇၅၀။ အဲဒီမှာမှ အဇ္ဈတ္တ သဏ္ဍာန်၊ ဗဟိဒ္ဓ သဏ္ဍာန် ရယ်လို့ နှစ်ပါးရှိတဲ့ အတွက် (၂)နဲ့ ထပ်မြှောက်တော့ ၁၅၀၀ ရတာပါပဲ။ အတိုကောက်ကတော့ ဒီလိုလေးပါ…
( ကိလေသာ (၁၀) ပါး x ရုပ်စုစုပေါင်း (၇၅) ) x ၂ = ၁၅၀၀ အချစ်ရတာပေါ့..
၂။ ၅၂၈ မေတ္တာ (မိဘတို့၏ အချစ်)
မေတ္တာဆိုတဲ့အတိုင်း မေတ္တာပို့ရာမှာ ရှိသင့်ရှိအပ်တဲ့ စိတ်သဘာဝ တစ်ခုပါပဲ။ မေတ္တာပို့ရာမှာ ပုဂ္ဂိုလ် (၁၂) ယောက်ကို ပို့ပါတယ်။
အဲဒါတွေကတော့ဒါလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာမှာပဲရှိတာပါ တခြားဘာသာတွေမှာဒီလိုမရှိဘူး မေတ္တာထားတာလောက်ကလေးပဲရှိပါတယ် ဂဂနနထုတ်ပြစရာသူတို့မှာမရှိဘူး။ဗုဒ္ဓဘာသာမှာက..
(၅) သဗ္ဗေအတ္တဘာဝ ပရိယပ္ပန္န၊
(၁၂) သဗ္ဗေဝိနိပါနိကာ ဆိုတာတို့ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ် (၁၂)ပါးကို မေတ္တာ(၄)ပါး ပို့ပါတယ်၊
သုခိအတ္တာနံ ပရိဟရန္တု၊” တဲ့ . . .
၊ ဒီတော့ ( ၁၂ x ၄ = ၄၈ ရပါတယ်)။ ဒါက အရပ်မျက်နှာ အမည်မတပ်ဘဲ (မရည်မှန်းဘဲ) ပို့တဲ့ “အနောဒိတ္တာ” မေတ္တာအပါး လို့ ဆိုပါတော့ ။ အဲဒါကိုမှ ထပ်ပြီး အရပ်မျက်နှာတွေနဲ့ အမည်တပ်ပြီး ထပ်ပို့ပါတယ်၊ အရပ် (၁၀)မျက်နှာ ရှိပါတယ် –
= အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြောက် ဆိုတဲ့ အရပ် (၄) မျက်နှာ။
=အရှေ့တောင်၊ အနောက်မြောက် ဆို့တဲ့ ထောင့် (၄) မျက်နှာ။
=အထက်နဲ့ အောက် (၂) မျက်နှာ ။
အဲဒီ အရပ်မျက်နှာတပ် ရည်မှန်းမှု့(၁၀)ခု နဲ့ စောစောက (၄၈) ကို မြောက်လိုက်တော့ (၄၈၀) ရပါတယ်၊ အဲဒီ ရလာတဲ့ (၄၈၀)ကိုမှ ပထမဆုံး မရည်မှန်းဘဲ ပို့ထားတဲ့ မေတ္တာအပါး (၄၈)ပါးကို ထပ်ပေါင်းကြည့် လိုက်တော့ (၅၂၈) ရယ်လို့ ဖြစ်လာပါတယ်။
အတိုကောက် ကတော့ ဒီလိုလေးဖြစ်ပါတယ်…
ပုဂ္ဂိုလ် (၁၂) ယောက် x မေတ္တာ(၄)ပါး = ၄၈ (မရည်မှန်းဘဲ ပို့သော မေတ္တာအပါး)
(၄၈ x အရပ် (၁၀) မျက်နှာ ) + ၄၈ (မရည်မှန်းဘဲ ပို့သော မေတ္တာအပါး)= ၅၂၈ မေတ္တာ
၁၅၀၀ဆိုတဲ့ပူလောင်တဲ့ကိလေသာ အချစ်နဲ့ ၅၂၈ ဆိုတဲ့အေးမြတဲ့မေတ္တာကိုတော့ သိပါပြီ၊ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူတွေမှာများ (၅၂၈)ဆိုတဲ့မေတ္တာကို ထားနိုင်မလဲ မသိ တော့ပါ။ မိဘတွေအနေနဲ့ သားသမီးတွေကို ချစ်တဲ့အချစ်ဟာ (၅၂၈) လို့ မသေချာပါဘူး (မဟုတ်ဖို့ များပါ တယ်)။ ဘာဖြစ်လို့လဲ
ဆိုတော့ (၅၂၈) ဟာ အရမ်း မြင့်မြတ်လွန်း နေလို့ပါ၊။
ဆရာမ “ဂျူး” ကတော့ (၅၂၈) မေတ္တာရဲ့ သဘာဝကို မြတ်စွာဘုရားက တပည့်သာဝက ရဟန်းတွေ အပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာမှာပဲ တွေ့ရတယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။
ကိုသျှားသက်မာန် ပြောတဲ့ မိဘတွေရဲ့ သားသမီးအပေါ်ချစ်တဲ့ အချစ်ကိုတော့ “၅၂၈ မေတ္တာ” ၊ အေးမြချမ်းမြေ့တဲ့ ချစ်ခြင်း မေတ္တာ ဆိုပြီး
ပြောဆိုလေ့ ရှိပါတယ်။ အဲဒီမေတ္တာဟာ အေးမြတယ်ဆိုတာ သားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပေမယ့် မိဘတွေဘက်ကတော့ မအေးမြပါဘူး … သားသမီးအပေါ်ချစ်တာ စိုးရိမ်တာတွေဟာ ပူလောင်ပါတယ် … သားသမီးတွေအနေနဲ့လည်း မိဘတွေဆီက ချစ်ခြင်းမေတ္တာမရလို့ မျှော်လင့်နေကြတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်း ပူလောင်ပါတယ် … တကယ်တော့ အချစ်ဆိုကတည်းက အေးမြတာမရှိပါဘူး … ပူပင်သောကများရတာ များပါတယ် ……….
မမခိုင်..အဲလာ ကို မဟုတ်ပါဘူးချင့်..မ ပါချင့်… မသျှားသက်မာန်ပါချင့်…
ဒုက္ခဟုသတ်မှတ်ထားသော အရာတို့သည် အေးချမ်းမှုကိုမပေးနိုင် ။
သုခဆိုရာတွင် ဒုက္ခ၏ ဆန့်ကျင်ရာ ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူမမှားစေချင် ။
အကုသိုလ်ကိုလည်း ကုသိုလ်ဖြင့် ချေဖျက်၍ မရစကောင်း ။
နားထဲရိုးနေတဲ့ ဂဏန်းတွေပေမယ့် အခုမှပဲ အဓိပ္ပာယ်တွေ သိတော့တယ်…ကျေးဇူးပါ..
ဆရာမောင်ပေ ပြောတဲ့အချစ်ဆိုတာကတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အပြန်အလှန် နားလည်ပြီးမှ လက်ထပ်ခြင်းပါ
ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ..ဘုန်းကြီးတပါး(အရှင်မုနိန္ဒ(ပန်းထို))က.. အပေါ်က သျှားသက်မာန် ရေးတဲ့အတိုင်း…တသွေမသိမ်းတူအောင်ရေးထားတယ်..။
သျှားသက်မာန် က.. ဘုန်းကြီး.. လားဟင်င်င်..